iPhone အသုံးပြုသူများကိုနားလည်ခြင်း Martech Zone
တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 10, 2011 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 26, 2011 Douglas Karr
There's no doubt of the impact that the iPhone revolutionized the smartphone industry. I bought an iPhone for my daughter but the big screen and seamless Google integration of the Thunderbolt (Android) was just too much to pass up so I didn't go that direction. My daughter absolutely loves her iPhone, though, and literally can't go ဘယ်နေရာမှာမဆို အဲဒါမရှိဘဲ ထံမှသတင်းအချက်အလက် PaidViewpoint.com provides some insight into iPhone users, how they use the device, what their retention is like, and why they'll upgrade. The jury is still out on the iPhone ကို 4S ပြီးတော့ Apple ပရိသတ်တွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုပြည့်မီနိုင်မလား။ မွမ်းမံမှု - ရောင်းအားသည်ဖုန်း ၁ သန်းကျော်ပြီးပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်ထင်သည်!